Vahaolana 11000 taona manoloana ny olana maoderina: mety hitombo ny ovy taloha amin'ny fanovana ny toetrandro - Potatoes News
Miaraka amin'ny haintany misy olana maharitra any amin'ny faritra Andrefana Andrefana, mpiambina masomboly Hopi / Tewa Valerie Nuvayestewa dia nanatevin-daharana ny ezaka hamerenana ny sakafon-tany indizena izay nambolen'ny razany nandritra ny 11000 taona. Ny ovy efatra zoro dia afaka maniry eo ambanin'ny tany maina ary manome proteinina telo heny ary indroa ny kalsioma ovy organika mena.
Ireo mpahay siansa sy mpitarika vondrom-piarahamonina vazimba teratany ao amin'io faritra io dia nanao hetsika hamerenana amin'ny laoniny ny tuber-tahan'ny haintany, fantatra amin'ny anarana siantifiana hoe Solanum jamesii, ho vahaolana ara-tsakafo ho an'ireo olona tratry ny fiovan'ny toetr'andro.
Nilaza ireo mpikatroka oniversite any Utah sy mpikatroka sakafo indizeny fa ny spud dia afaka mijanona mandry an-taonany maro amin'ny toetr'andro maina, mbola manolotra tombony ara-tsakafo toy ny vy sy ny zinc ho an'ny olombelona.
"Tsy mbola nitombo ny Ovy Efatra An-jorony aho hatrizay, ka izany dia ho fanamby rehefa mianatra rehefa mihalehibe."
Ny filàna voly manavao dia nanjary miharihary kokoa nanomboka ny 9 Aogositra, rehefa namoaka tatitra ny Vondrona iraisam-pirenena momba ny fiovan'ny toetr'andro izay nilaza fa nanafana ny atmosfera sy ny ranomasina ary ny tany ny ambaratonga izay “mbola tsy nisy toy izany” tao anatin'ny 2,000 taona lasa. Ny mpanoratra IPCC dia nilaza fa ny Southwest dia antenaina hihafana hatrany amin'ny 2 degre, miaraka amin'ny haintany mitombo fahita ao anatin'ny folo taona ho avy. Ny oram-baratra mahery izay mety hiteraka tondra-drano dia vinavinaina hitombo ihany koa, araka ny asehon'ireo oram-be mivatravatra amin'ity fahavaratra ity Arizona, Colorado, New Mexico ary Utah.
Tantara efa hatramin'ny an'arivony taona maro
Ny fampidiran'i Nuvayestewa ny ovy Four Corners dia tonga tamin'ity lohataona ity, rehefa nanasa azy ho anisan'ny Tetikasa Fambolena Ovy ny fandaharana nentim-paharazana ao amin'ny Diné Bikéyah ao amin'ny nonprofit, Utah Diné Bikéyah. Tao anatin'izay taona faramparany izay dia nahita porofo ny mpikaroka fa namboly ovy tao Utah an'arivony taona maro talohan'ny noheverina fa nentina tany Amerika Avaratra avy any Andes ny ovy.
Cynthia Wilson (Diné), talen'ny Programme Sakafo nentim-paharazana ao Utah Diné Bikéyah:
“Manentana ny“ hampody an-tanindrazana ”ny ovy efatra zoro ireo mpikatroka ara-tsakafo sy mpiaro ny tontolo iainana. Ny fampodiana an-tanindrazana dia nofaritana ho famporisihana ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ny olombelona hafa hamboly zava-maniry tera-tany amin'ny fomba mifamaly amin'ny fanajana ny tontolo voajanahary amin'ny alàlan'ny fampianarana sy soatoavina matrilineal. Noho izany, ny ezaka hampifandraisana ny ovy amin'ireo mpiandry voa vazimba teratany toa an'i Nuvayestewa. ”
Tamin'ny vanim-potoana fambolena voalohany nampiasany ireo masomboly, nilaza i Nuvayestewa fa nafindra avy tao anaty vilany kely kokoa izy ireo tamin'ny fahavaratra ho lasa vilany lehibe kokoa. Ny sasany tsy tafavoaka velona tamin'ny famindrana azy, saingy mbola manana zavamaniry vitsivitsy sisa izy. Mikasa ny hizara ny vokatra azony izy rehefa avy omena ny zaridaina sy ny tantsaha hafa ao an-tanànany .Valerie Nuvayestewa:
"Namboly karazana ovy hafa aho, fa ny Ovy Efatra an-joro tsy mitovy ary tsy tia hamandoana be loatra. Mazava ho azy fa mbola mila hamandoana ihany izy io nefa mety hijanona mandry ihany koa mandra-pahatongan'ny orana."
“Kely ny orana tao anatin'izay dimy taona lasa izay, ary vao tsy ela akory izay no nahazo orana be dia be izay toerana ipetrahako ao amin'ny First Mesa, noho izany dia mahita zavamaniry maitso misimisy kokoa manodidina ireo mesa izahay fa tsy ireo ala maina, volontsôkôlà, kirihitra. Mihena tsy ho ela ny orana… ratsy any ivelany. ”
Tsaroan'i Nuvayestewa fa nisy mpamboly Hopi iray teo an-toerana, Max Taylor, nanome voa iray ovy mitovy aminy, roa taona lasa izay. Saingy ny Tetikasa Fambolena Ovy dia nanararaotra ny fahafaha-niditra tamin'ny masomboly tuber avy amin'ny tsangambato Bears Ears National Monument ary Grand Staircase Escalante National Monument. Ny tsangambato nasionaly dia ny velaran-tany razamben'i Hopi, Zuni, Diné, Ute, Paiute, ary Pueblos any New Mexico.
Araka ny voalazan'i Lisbeth Louderback, mpikarakara ny anthropology ao amin'ny Natural Museum of Utah, ireo zavamaniry ireo dia novolen'ny Vazimba, anisan'izany ny Hopi, hatramin'ny 11,000 taona lasa izay. Nilaza izy fa hita ihany koa izy ireo ary maniry any amin'ny tanim-panjakana any atsimon'i Utah, saingy tsy nampiasaina hamboly olona intsony.
Andraikitry ny razana
Nilaza i Nuvayestewa fa nianatra ny lanjan'ireo sakafo mitombo avy amin'ny ray aman-dreniny sy ny raibeny ary mampianatra ny zanany izy izao.
“Manomboka mijery fomba samihafa amin'ny fambolena sy ny fijinjana izay orana kely azontsika. Ahoana no hitazomantsika izany hamandoana izany amin'ny tanintsika satria mihena ny orana ary maina be ny tany? Ratsy any ivelany any. ”
Nilaza i Wilson fa ny Tetikasa Fambolena Ovy dia mikendry ireo mpikarakara zaridaina sy ireo vehivavy vazimba teratany toa an'i Nuvayestewa hitarika sy handamina ny lohalaharana ho an'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo, indrindra fa nandritra ny areti-mandringana COVID-19 izay nisy fifohazana hanangonam-bokatra rehefa avy nihidy.
Nilaza i Wilson fa be fanantenana izy na eo aza ny fanamby ateraky ny fiovan'ny toetr'andro satria ny vondrom-piarahamonina vazimba dia mazàna mahatsiaro ny fampiasana rano. Ohatra, ny vondrom-piarahamoniny any Oljato, Utah, dia manana fantsana iray monja - matetika ampiasaina amin'ny fanondrahana rano hambolena, hisotro, handro, na hampiasana biby fiompy. Ampitahao amin'ny toerana an-tanàn-dehibe toa an'i Salt Lake City na Phoenix, izay misy dobo sy bozaka ampiasaina amin'ny fialamboly.
“Mihevitra aho fa noho ny tsy fisian'ny rano ao an-tsaintsika efa ela, dia vao mainka manome fankasitrahana bebe kokoa antsika izany. Ary te-hanao zavatra momba an'io aho. ”
Ny ampahany amin'ny asany, hoy izy, dia mitaky ny fanisana ireo toeram-piompiana matory eo amoron'ny reniranon'i San Juan any San Juan County, Utah, ary ny famelomana indray azy ireo amin'ny sakafo indizeny.
"Ity tetik'asa amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny Four Corners ity dia andraikitry ny razambe amin'ny fanatanterahana ireo fampianarana ireo.
Nampiany koa fa manantena izy fa ny asany dia hanampy ny olona hifandray amin'ny fampianaran'ny razana.
"Ahoana ny fambolena ny masomboly, ary ny fomba fitehirizana ny rano, ny fikajiana ny tany, ary ny fanolorana antsika hijinja ireo fitaovantsika mahandro, sy ireo fanafody ary hamerina ilay tany."
“Mamboly ny tanimbolinay foana izahay na inona na inona, isan-taona, na inona na inona orinay na oram-panala. Nampianarina izahay fa mamboly ianao ary mino ianao fa ho avy ny orana hitsidika ny katsaka sy ny vilany ovy. ”
Tags: Ovy talohamaoderinaolana
Ny asa dia manomboka amin'ny trano fitrandrahana proteinina ovy £ 6 mln UK